June 11, 2021 7017
खानपानमा ध्यान नदिंदा इम्यूनि`टी पावरमा कमी आउँछ ।अहिले केही रिपोर्ट्सहरूले इम्यूनिटी पावर कम|जोर भएकाहरूलाई कोरोना भा|इरस संक्रमणको ख`तरा बढी हुने जनाइरहेका छन् । ​
खानपानमा विशेष ध्यान दिंदा इम्युनि|टी पावर बढाउन सकिन्छ । एक नयाँ अध्ययनका अनुसार इम्यूनि|टी पावर बढाउनका लागि खानामा केही विशेष परिकार समावे|श गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यी ७ चीज, जसले इम्यूनि|टी पावर बढाउन सहयोग गर्छ
रातो क्याप्सिकम – रातो क्याप्सिकनमा सबैभन्दा बढी भिटामिन सी पाइन्छ । अमेरिकी कृषि विभागका अनुसार एक टुक्रा क्या|प्सिकनमा करिब २ सय ११ प्रतिशत भि|टामिन सी हुन्छ । जुन सुन्तलामा पाउने भिटामिन सीभन्दा दुई गुणा बढी हुन्छ । २०१७ मा नेशनल इन्स्टीट्यूट अफ हेल्थमा प्रका|शित एक अध्ययनका अनुसार भिटा|मिन सी शरीरमा त्यी कोशिकाहरू|लाई मजबूत बनाउँछ, जसले इम्यू|निटी बढाउँछ ।
ब्रोकाउली – बोकाउलीमा भिटा|मिन सी अत्याधिक मात्रामा हुन्छ । आधा कप ब्रोकाउलीमा ४३ प्रतिशत भिटामिन सी हुन्छ । अमेरि|काको इएचई हेल्थका फिजिशियन डा. सीमा सरीनले भनेका छन्,‘ब्रोकाउलीमा फाइटोके`मिकल्स र एन्टीअ|क्सिडेन्टको मात्रा भरपूर हुन्छ जसले हाम्रो इम्यूनको मजबुत बनाउँछ ।
चना – चनामा प्रोटिन अत्या|धिक हुन्छ । एके|डेमी अफ न्यूट्रिसन एण्ड डाइटेटिक्सका अनसार चनाले एन्जाइमलाई सन्तुलनमा राख्छ, जसबाट हाम्रो शरीर|ले ठीक तरिकाले काम गर्न सक्छ । डाइटि|शियन एमिली वन्डरका अनुसार चनामा प्रचुर मात्रामा जिंक पाइन्छ जसले इम्यून सिस्टम र इम्यून रेस्पोन्सलाई नियन्त्रण|मा राख्न सक्छ ।
लसुन – लसुन खाँदामा स्वा|दिलो हुनुका साथै स्वास्थ्य|का लागि पनि निकै लाभदायक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । लसुनको सेवनले उच्च रक्तचाप तथा मुटुरोगको खत|रा कम गराउँछ । यस्तै यसमा पाइने सल्फर यौगिकका कारण संक्रम|णबाट लड्ने क्षमतामा वृ|द्धि हुन्छ । लसुनको सेवनले इम्यू`निटी समेत बढ्दछ ।
च्याउ – च्याउ भिटामिन डीको स्रोतहरूमध्ये एक हो । च्याउको सेवनले क्याल्शियम बढाउँछ जसले हड्डीलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । साथसाथै यसले इम्यूनिटी पावर बढाउनमा सहयोग गर्छ ।
पालक – पालकमा भिटामिन सी र एन्टीअक्सिडेन्ट्स अत्याधिक मात्रामा हुन्छ । जसले हाम्रो शरीरमा रहेको कोशिका|हरूलाई संक्रमणबाट जोगाउन सहयोग गर्छ । पालकमा भिटा क्यारोटि|न समेत पाइन्छ, जुुन भिटामिन एको मुख्य स्रोत हो । भिटामिन ए ले इम्यून फंक्श|नको सही ढंगले चलाउ|नका लागि सहयोग गर्छ ।
दही – दही प्रोबायोटिक्सको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । यसमा भएको ब्याक्टेरियाले पा`चन प्रणाली तथा इम्यून सिस्टमलाई सही राख्दछ । केही अध्ययनहका अनुसार दहीको सेबनले प्रोबायोटि|क्सको सामान्य रुघाखोकी तथा इन्फ्लूएन्जाजस्ता संक्र`मणसँग पनि प्रभावकारी ढंगले लड्दछ । – खबर वाइड
Prevनेपालमा आज सुनको भाउ बढ्यो की घट्यो ? हेर्नु`होस्
Nextकिसानले ‘यस्ता बाख्रा त हामी लिन्नौं’ भनेपछि नगर-पालिकाले फिर्ता गरिदियाे
आमाको वैवाहिक जीवन सुन्दै गर्दा अञ्जु पन्तकी छोरीको आँशु थामिएन (भिडियो सहित)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132954)